My World: ကားမလိုပါ ကြည်နူးစရာ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်နေရာလေးတွေမှာ
Posted by PhyoPhyo at Thursday, August 25, 2016 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး
ကားတွေမရှိတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကို စိတ်ကူးယဉ်ဖူးပါသလား။ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးတွေကို သေသေချာချာမှတ်ထားရတော့မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာလေးတွေမှာတောင်မှ အဆောက်အဦတွေ တည်ဆောက်ပုံ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတာ၊ ဆူညံသံတွေနှောင့်ယှက်တာတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ကားအသွားအလာများလွန်းတာ၊ ကားရပ်နားဖို့နေရာ ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရတာတွေကြောင့် ဓာတ်ဆီဖြုန်းတီးရတာ စိတ်ညစ်လှတယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဒီနေရာလေး ၁၀ ခုဆီ ဦးတည်နိုင်ကြတယ်။ စက်ဘီးလေးတစ်စီးဆုပ်ကိုင်၊ ရှုးဖိနပ်ကြိုးလေးတင်းတင်းစီးလို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခရီးနှင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁. Mackinac Island, Michigan
၁၈၉၈ ခုနှစ်မှာ Lake Huron က ကျွန်းလေးပေါ်မှာ စက်တပ်ယာဉ်အားလုံးတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မိသားစုလေးတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချစ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့နွေရာသီအပမ်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ခရီးသည်တွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကတော့ စက်ဘီးနဲ့ မြင်းဆွဲတဲ့လူစီးလှည်းတွေပဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျွန်းလေးမှာ ရှိနေစဉ်အချိန်လေးအတွင်း ရှေးပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိသလို ခံစားမှုမျိုးရရှိနိုင်မှာပါ။
၂. Sark, United Kingdom
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ နော်မန်ဒီကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက Sark ဟာ အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကျွန်းစုတွေထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်းပါ။ ကျွန်းလေးဟာ သေးငယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်မတန်လှပတဲ့ရှုခင်းတွေ ရှားပါးပြတ်လပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲ ခရီးဝေးလမ်းလျှောက်တာနဲ့ စက်ဘီးစီးဝါသနာကြီးသူတွေအတွက် အပြည့်စုံဆုံးကျွန်းလေးပါ။ ကျွန်းပေါ်မှာ ထွန်စက်တစ်မျိုးတည်းသာ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တော့ မြင်းလှည်း၊ စက်ဘီးနဲ့ လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေအသုံးပြုပြီး သွားလာနိုင်ကြတာပေါ့။
၃. Venice, Italy
ကားတွေသာ ခွင့်ပြုထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကွေ့ပတ်သွားရပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းတွေရှိတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့အလှအပဟာ ခုလို တည်တံ့နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗင်းနစ်ကျွန်းမြို့တစ်လျှောက်နဲ့ အနီးအနားက Murano နဲ့ Lido ကျွန်းလေးတွေဆီသွားလာလိုကြတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့သားတွေနဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို Vaporetto လှေဘတ်စ်လေးတွေက သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဗင်းနစ်ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ တူးမြောင်းတွေကိုတော့ ဂွန်ဒိုလာဦးကော့လှေတွေစီးပြီး ခရီးသွားနိုင်ကြတယ်။
၄. Fes el-Bali, Morocco
Old Fes လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ Fes el-Bali မြိုဟာ အလယ်ခေတ် ဝင်္ကပါလမ်းတွေရှိတဲ့မြို့ကြီးပါ။ ကားတစ်စီးမှရှိမနေတဲ့မြို့ပြထူးဆန်းထွေလာကမ္ဘာအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဈေးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ဗလီတွေကို လမ်းလျှောက်ပြီးလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ကြတယ်။
၅. La Cumbrecita, Argentina
Calamuchita တောင်ကြားမှာရှိနေတဲ့ La Cumbrecita မြို့ဟာ မျက်စိပသာဒရှိလှတဲ့ သေးသေးငယ်ငယ်မြို့လေးပါ။ တောင်ပေါ်ဒေသစတိုင်ရွာလေးမှာ ခြေကျင်လမ်းသွားလမ်းလာများသာဆိုတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားလေ့လာလိုတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ အသွားအလာများတဲ့နေရာပါ။ ခရီးသွားတွေဟာ တောတောင်လမ်းလေးတွေထဲ ခရီးဝေးလမ်းလျှောက်ပြီး ရေတံခွန်တွေတသွင်သွင်စီးဆင်နေပုံကို ငေးကြတယ်။ ကြယ်တွေစုံလင်တဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာ ယာယီတဲထိုးစခန်းချကြတယ်။ ဧည့်သည်တွေဟာ အနီးအနားက ကားရပ်နားတဲ့နေရာတွေမှာ ကားတွေရပ်ထားခဲ့ပြီး Rio del Medio မြစ်ပေါ်က တံတားကို ခြေကျင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြတယ်။
၆. Hydra, Greece
တူရကီနဲ့ ဂရိကမ်းရိုးတန်းကြားတည်ရှိတဲ့ Aegean ပင်လယ်ထဲက အပြည့်စုံဆုံးပန်းချီကားချပ်အလှအပမျိုးရှိနေတဲ့ Hydra ကျွန်းဟာ သဘာဝအတိုင်းကို သုခံဘုံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဘီးပါတဲ့စက်တပ်ယာဉ်မှန်သမျှအသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူး။ ကားမရှိသလို စကူတာဆိုင်ကယ်လေးတွေလည်း ရှိမနေပါဘူး။ ချောချောပြောင်ပြောင်ကျောက်လုံးလေးတွေ အစီအရီထားတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ ခြေကျင်ခရီးသွားတွေနဲ့ မြည်းတွေသာ သွားလာနိုင်ကြတာပေါ့။ Saronic ကျွန်းတွေထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Hydra ကျွန်းလေးဟာ ဗိသုကာပညာရပ်တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာကြောင့် နာမည်ကြီးလှပါတယ်။ ရေတွေပြာလဲ့ကြည်လင်လွန်းတာရယ် ပုန်းကွယ်နေတဲ့ပင်လယ်အော်တွေနဲ့ သိပ်လှတဲ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ခြေကျင်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်တွေကြောင့် လူသိများတဲ့ Hydra ကျွန်းလေးပါ။
၇. Bald Head Island, North Carolina
သင့်ရဲ့ ပူဆွေးသောကတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ကားကိုပါ ထားပစ်ခဲ့လိုက်ပြီး မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားက Bald Head Island ဆီ ဦးတည်လိုက်ပါ။ မျက်စိပသာဒရှိလှတဲ့ကျွန်းလေးဟာ အားလပ်ရက်အတွက်ရွေးချယ်စရာနေရာလေးအဖြစ် ပေါ်ပြူလာဖြစ်လှတယ်။ များပြားလှတဲ့ ကမ်းခြေတွေ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေဂေါက်ကွင်းတွေနဲ့ တမူထူးခြားလှတဲ့ တစ်ထပ်အိမ်လှလှလေးတွေရှိကြတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဆိုရင် ဂေါက်ကွင်းသုံးလှည်းလေးတွေ၊ စက်ဘီးနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုအားကိုးပြီးသွားလာလည်ပတ်ရမှာပါ။
၈. Giethoorn, Netherlands
အမ်စတာဒမ်ရဲ့ အရှေ့မြောက် ၅၅ မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ Giethoorn မြို့လေးကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ Dutch Vince လို့ ခေါ်ဆိုကြတယ်။ မြို့ရဲ့ တူးမြောင်းတစ်လျှောက် ပေါင်းမိုးသဏ္ဍန်ပေါင်းကူးဖွဲ့ယှက်ထားတဲ့ တံတားပေါင်း ၁၈၀ ရှိတယ်ဆိုတာဟာ မြို့လေးရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါ။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်အပြင်လောကထဲ ခုန်ထွက်လာသလို ထူးခြားတဲ့အလှအပမျိုးလို့ညွှန်းဆိုကြတယ်။ တူးမြောင်းတွေထဲမှာ လှေနဲ့ ခရီးသွားနိုင်ပြီး မြို့လေးရဲ့ တခြားနေရာတွေကိုတော့ ခြေကျင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၉. Fire Island, New York
Fire Island ဟာ သင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲက နွေရာသီခရီးစဉ်လေးတစ်ခုပါ။ Long Island တောင်ဘက်ကမ်းခြေခပ်ဝေးဝေးမှာ အဲဒီကျွန်းလေးရှိပြီး ကမ်းခြေတွေ၊ ပင်လယ်အော်၊ ပန်းခြံတွေရှိပြီး အများအားဖြင့် ပူနွေးတဲ့လအတောအတွင်း စုရုံးရောက်ရှိလာကြတဲ့ တမူထူးတဲ့လူစုလူဝေးတွေနဲ့လည်းဆုံတွေ့နိုင်ကြတယ်။ ဒေသခံနဲ့ ဧည်သည်တွေဟာ စက်ဘီးစီးပြီး ကျွန်းတစ်လျှောက်သွားလာကြတယ်။ လမ်းလျှောက်တယ်။ ပြီးတော့ ကမ်းခြေမှာ ကျောခင်းလဲလျောင်းပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ လေထုကို အားပါးတရရှုရှိုက်နိုင်ပါတယ်။
၁၀. Zermatt, Switzerland
Zermatt မြို့ဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်နေရာတွေထဲက သိပ်လှတဲ့တောင်ထွတ် Matterhorn အပါအဝင် တချို့နေရာတွေရဲ့ အောက်ခြေမှာတည်ရှိတယ်။ တောင်မြင့်ဒေသပိုင်းက မြို့လေးဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးကို ငေးမောကြည့်ရှုနိုင်တာတင်မကသေးဘဲ နှင်းလျှောစီးနဲ့ ဆောင်းတွင်းကစားနည်းတွေ အတွက် ခရီးပန်းတိုင်တစ်ခုပါ။ ကားမရှိတဲ့ Zermatt မြို့ရဲ့လေထုဟာ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသလောက် သန့်စင်လှပါတယ်။ ။
Source: 10 Magical Places Where There Are No Cars | www.huffingtonpost.com